Shariif Xasan, Xubnaha Baarlamaanka, hogaamiyeyaasha Muqdisho iyo Col. C/llahi oo heshiiska Cadan si hoose dantooda gaarkaa is afgarad ku ogolaaday in wax la wada qeybsado lana kala daneysto.
Buluugleey, January 22, 2006
Waxaa heshiis si shaqsi ahaan ah loo soo diyaariyey uu bisha Janaayo 5teeda uu ku dhex maray magaalada Cadan mudane Shariif Xasan iyo mudane Col. C/llahi Yusuf. Labadan nin ayaa doonayey iney ka baxaan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey, awoodoodiina dhulka dhigay.
Col. C/llahi ayaa Prof. Geeddi iyo Prof. Dalxo u adeegsan jirey iney jilbaha dhulka u soo dhigaan wadaadkan aan daaleyn ee bulshada caalamka ku dhexmeereysanaya sidii inuu yahay wasiir dibedeedka dalka. Col. C/llahi ayaan ahayn qof madaxweynenimo mudan, waayo wuxuu gacantiisa ku galay dhiiga shacabka Soomaaliyeed.
Shariif Xasan ayaa isna wuxuu adeegsanayey hogaamiye kooxyada hubeysan ee ka jira Muqdisho si cududooda uu ugu baaciyo ama ugu cabsigeliyo kooxda Jowhar ee Col. C/llahu uu hor kacayo. Shariifka ayaan lahayn aqoon iyo waayoaragnimo siyaasadeed, xil gudoomiyenimana aan ku habooneyn.
Col. C/llahi ujeedada uu u daneynayo heshiiskan waa in loogu ogolaado in laga qaado cunoqabateynta ka saran xaga hubka iyo inuu dalka soo geliyo ciidamo shisheeye, labadaas arrimood oo uu rajeynayo iney si buuxda u dhameystirto awoodiisa madaxweynenimo oo uu si buuxda dalka uga taliyo. Qodobadaas oo ah kuwii ay ka dhalatay in loo kala jabo laba garab. Col. C/llahi haddii uusan labadaas qodob ka waantoobin daacad kama ahan heshiiska Cadan iyo in la dhameeyo khilaafka Siyaasadeed.
Sabtidii bisha Janaayo ay ahayd 21ka, ayaa waxaa magaalada Muqdisho isugu yimid xubnaha baarlamaanka, garabka Muqdisho iyo hogaamiyeyaasha hubeysan, wuxuuna shariif Xasan ka codsaday in lagu taageero heshiiska uu la galay Col. C/llahi. Kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday in la ogolaaday waxa Shariif Xasan uu qeyb ahaan u soo qaaday kooxda Muqdisho. Shariifka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo Dowlada Itoobiya oo ka codsatay QM iney Soomaaliya ka qaado xayiraada hubka, sidoo kale Shariif Xasan wuxuu ka aamusay codsiga Col. C/llahi uu wasiirkiisa arrimaha Dibeda mudane C/llahi Sheekh Ismaciil uu madaxda Afrika ee ku shireysa magaalada Khartuum ee dalka Suudaan kaga dalbaday in Soomaaliya ay si deg dega ugu soo diraan ciidan nabad ilaalineed,kuwaas oo kooxaha hubka ka dhiga. Shariifka ayaa aaminsan in awoodiisa ay ku lixaadsaneyso haddii miisaaniyada lacagaha loogu tala galay mushaarka xubnaha baarlamaanka ay gacantiisa ku soo wareegto, wuxuuna ugu jiraa dadaal aan kala go’ lahayn sidii uu awoodaas ka dhiman uu u dhameystiran lahaa.
Xubnaha baarlamaanka ayaa daneynaya in la siiyo mushaarkooda iyagoo ogsoon ineysan jirin shaqaale kale iyo shacbi kale oo la siinayo xuquuq mushaar, marka laga reebo wasiirada dowlada. Sidoo kale waxey xubnahaas rajeynayaan in haddii Shariifka qeybtiisa loo ogolaado ay wax ka helayaan jagooyinka sare ee dowlada. Ilaa iyo hadda xubnaha baarlamaanka kama aysan ficiltamin dhawaaqyada ciidan doonkaa ee ka soo yeeraya Col. C/llahi iyo kooxdiisa, waxeyna u muuqata iney si fiican ula jilayaan korneylka rabitaankiisa.
Hogaamiyeyaasha hubeysan ayaa iyaguna daneynaya in saami xoogan laga siiyo lacagaha deeqda si ay u helaan qarashka uga baxay gunooyinka maleeshiyooyinkooda ku xareysan xerooyinka Laanta Buur iyo Hiilweyne. Hogaamiye kooxeedyadaan ma aysan soo hadal qaadin qodobkii ay ku heleen hiilada caalamka oo ah in dowlada iyo baarlamaankuba ay xaruuntoodu ka shaqo gasho magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Heshiiska Cadan cidda keliya ee la doonayo in lagu waxyeeleeyo waa hogaamiyeyaasha Muqdisho, arrintaas waxaa qiray dowlada Itoobiya oo markii ay u dirtay codsiga QM oo ay uga dalbaneysey in Soomaalida laga qaado xayiraada hubka ku sheegtay in loo baahan yahay in ciidan ahaan looga hortago kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda nabada iyo dowladnimada Soomaaliyeed, kuwaas oo loola jeedo hogaamiye kooxeedyada Muqdisho.
Heshiiska ay sida shaqsi ahaanta ah ay u soo gaareen Shariif Xasan iyo Col. C/llahi ayaa ah mid si hoose loogu xisaabiyey danaha ay leeyihiin kooxaha iska soo horjeeda, waxaana cid walba loo ogol yahay iney fulsato danaheeda gaarkaa. Labadaas masuul mid walba wuxuu qorsheynayaa iney dhameystirtaan awoodahooda ay dhantaashay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada nin. Waxaa iska cad in midba uu doonayo inuu kan kale ku soo rogaalceliyo isagoo inta ka awood badan iyadoo la kala adeegsanayo ciidamo shisheeye iyo wakiilada baarlamaanka. Heshiis la’aanta ka taagan qodobadii horay loogu dagaalamay ayaa ah tusmo muujineysa inuusan jirin heshiis si daacad ah loo gaarey, laakiin is afgarad hoose lagu gaarey in qof walba dantiisa gaarkaa la tixgeliyo.